FAQs | Taizhou Huangyan Longxin Mould Co., Ltd.
Isu tiri fekitori.
Ndinosvika sei kufekitori yako?
Unogona kuuya kuguta redu nendege, bhazi kana chitima.Zvinotora maawa maviri kuti ubhururuke kubva kuGuangzhou kuenda kuguta redu.Zvinotora maawa 3.5 kuti usvike kuguta redu kubva kuShanghai nechitima.Ingori awa nechitima kubva kuNingbo kuenda kuguta redu. .
Chii chinonzi kudzora kwemhando mufekitori yako?
Isu tinotenda kuti "mhando iri pamusoro pezvose". Tine timu yehunyanzvi yekudzora mhando. Yedu mhando yekudzora timu inonyanya kuita anotevera matanho.
Dhizaini yekugadzirisa kudzora B: kuomarara kuongorora kweforoma simbi C: pombi inokodzera muforoma gungano rekuongorora Kana uine chero mimwe mibvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu seinotevera.
Kana ndikakupa nemifananidzo ye3D yechigadzirwa, unogona here kudzokorora uye kugadzira kuumbwa zvinoenderana nemifananidzo ye3D?
Hongu.DWG, DXF, STEP, IGS, uye X_T mafaera anogona kushandiswa kudzokorora uye kugadzira mafomu zvinoenderana neyako modhi - izvi zvinogona kuchengetedza nguva nemari mukugadzira zvikamu.
Tinogona kugadzira ese marudzi epurasitiki jekiseni anoumba, PVC, PPR, Pe uye imwe pombi fittings muforoma. Tinogona kukurudzira inokodzera nhamba yemakomba zvichienderana nehukuru hweiyo jekiseni kuumbwa muchina
Ndeapi mazwi ako ekubhadhara?
Na t / T, L / C, garandi yekutengeserana uye Western Union.
Inguvai yako yekuendesa nguva yekuumbwa?
Mushure mekudhirowa chakuvhuvhu, zvinotora mavhiki masere kusvika gumi nemasere kugadzira chakuvhuvhu, zvinoenderana neyakaumbwa chimiro uye huwandu hwemakomba (asina kuroorwa kana akawanda). Dhirivhari zuva richaverengerwa kubva pazuva raunotendera muforoma kudhirowa. Mushure mekusimbisa mhedzisiro yedu yekupedzisira, tinogona kukutumira iyo pulasitiki muforoma mukati mevhiki rimwe.